Waa Maxay Tiifow?!
Author Topic: Waa Maxay Tiifow?! (Read 45876 times)
« on: December 26, 2007, 12:57:42 PM »
salaan kadid waxaan jeclaan lahaa in aad ii sheegtaan waa maxay cudurka la yiraado tiifow ?
Re: Waa Maxay Tiifow?!
« Reply #1 on: December 27, 2007, 01:58:56 AM »
Tiifow waa cudurka loo yaqaano "Typhoid ama Enteric Fever".
Tiifowgu waa cudura ay keento bakteeriyada loo yaqaano "Salmonella"
Tiifowgu wuxuu ka mid yahay cudurada dilaaga ah ee ku badan caruurta iyo dhalinyarada.
Tiifowgu waxaa ku qaadi kartaa adigoo cuna ama caba cunto wasaq ka soo gaartay saxaro ama kaadi.
Tiifowga calaamadihiisa waxay bukaanka ka soo muuqdaan 1 ilaa 3 usbuuc ka dib markii cudurku uu qaado, taasoo kala duwan qatarteeda.
Tiifowga calaamadihisia waxaa ka mida ah: qandho ama xumad siyaado ah, tabar darri, madax xanuun, saxaro adeyg ama shuban, feeraha oo fidhidhicyo gaduudan kaaga soo baxaan iyo beerka ama beer-yaraha oo barara.
Tiifowga waxaa jiro nooc caloosha ku dhaca oo lagu garto shuban iyo qandho siyaao ah, halkaan ka akhriso: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=990.0
Tiifowga waxaa lagu daaweeyaa antibayotik / qallajiyayaal, inkastoo daawooyinka qaar ay lid ku noqoto bakteeriyada keento cudurkaan.
Dadka cudurkaan xambaarsan waa in laga mamnuucaa cunto geynta ama qeybinta khaas ahaan kuwa ka shaqeeya biibitooyinka ama maqaayadaha sababtoo ah si sahlan ayay ugu gudbin karaan dadka kale.
Fikradaha qaldan ay soomaalida ka aaminsan tahay xanuunkaan ayaa ah inuu sida malaariyada oo kale u badan yahay, oo caadi tahay in qof kasta iska qabi karo, fikirkaas qaldan awgiis dad badan ayaa daawo aysan u baahnayn iska qaato. Akhriso qoraal ku saabsan cudurrada sida qaladka ah daawada loogu qaato: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,7381.0.html
Mida akel xanuun kasto oo qandho, murqo xanuun, iyo madax xanuun wata, ma ahan tiifow, waa in aad dhakhtar aqoon leh u tagtaa haddii aad xanuunsan tahay si laguu baaro, xanuunkaagane laguugu sheego.
Fikradaan qaldan waxay sheybaarada iyo farmashiyaasha qaar ku boorisay in ay cudur aan jirin iyo daawo aan loo baahnayn ay bukaanada siiyaan.
HALKAAN KA AKHRISO TIIFOWGA CALOOSHA (SALMONELLOSIS)
« Reply #2 on: January 02, 2011, 01:17:53 PM »
walaal waad mahadsantihiin!
si wanaagsan ayaad iigu faahfaahiseen oo waan wada fahmay
alle khayr ha idin siiyo walaalayaal
« Reply #3 on: May 07, 2019, 04:46:33 PM »
Asc somali doctors waa mahadsantihin
Waxaan qaba sual la xarirta tiifow waxaan isku arkay qandho badan iyo murqo xanun
Shalay ayaa dhaqtar u tagay waxaa u idhahay tiifow ayaa ku haayo
Waxa u soo qoray dawo cirbado ah lkn waxan leyahay uur wax dhib ah miyuu uurku jirta ku keeni kartaa
Views: 26162 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 26468 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 22002 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 8579 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 8034 January 22, 2019, 08:47:10 PM